ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: August 2013
အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့နှင့် ကထိန်းသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ နေ့ရက်များ
၂၀. ၁၀. ၂၀၁၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ပွဲကိုလည်းကောင်း၊ ၁၀. ၁၁. ၂၀၁၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကိုလည်းကောင်း ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းမိသားစုများမှ ဆင်နွှဲကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်း မိသားစုများ၏ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်း မိသားစုများ၏ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို Nied Saalbau ၌ ၂၅. ၀၈. ၂၀၁၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့က စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နံနက် ၁၁း၀၀ နာရီအချိန်မှာ ဆရာတော် သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်းနှင့် အချိုပွဲများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ဧည့်ပရိသတ်များအား ကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး၊ နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီအချိန်မှာ ငါးပါးသီလဆောက်တည်၍ ပရိတ်တရားတော်များကို နာယူခြင်း၊ ၀ါဆိုသင်္ကန်းများ အသီးသီး ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ အဲဒီနောက် အနုမောဒနာတရားများ နာယူကြကာ လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့အတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲတွင် လှူဒါန်းငွေ စုစုပေါင်း ၇၂၅ ယူရို ရရှိပါသည်။
အလှူရှင်မိသားစုများ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့စွာဖြင့် သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။
၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့၊ ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းမိသားစုများ စုပေါင်း၍ ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်ပွဲကို ၂၅. ၀၈. ၂၀၁၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဖော်ပြပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကြွရောက်ကြည်ညို ကုသိုလ်ယူကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျင်းပမည့်နေရာ။ ။ Nied Saalbau, Heinrich - Stahl - Str 3, 65934 Frankfurt am Main
အချိန် ။ ။ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၃း၀၀ နာရီအထိ
မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့် ဆွမ်းဘောဇဉ်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပါမည်။
ဧည့်ပရိသတ်များအား ဦးသိန်းယု + ဒေါ်ချစ်ချစ် မိသားစု မှ မုန့်ဟင်းခါးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကိုအောင်အောင် + မစိမ့်စိမ့်လှိုင် မိသားစုမှ ဖာလူဒါဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကိုနေ၀င်းလှိုင် + မမိစံ မိသားစုမှ ကျောက်ကျောဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကိုညီ + မသန်းသန်းဝင်း မိသားစုမှ ရွှေကျီမုန့်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ခွန်လွန်းကျော်နှင့် ဇနီး မိသားစုမှ တို့ဟူးသုပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဦးတင်ဖေ + ဒေါ်အုံးမမ မိသားစုမှ အကြော်စုံဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဦးလှ + ဒေါ်ခင်ထွေး မိသားစုမှ မုန့်လုံးကြီးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒေါ်ကျင်သန်း မိသားစုမှ ပုသိမ်ဟာလ၀ါဖြင့်လည်းကောင်း တည်ခင်းဧည့်ခံ လှူဒါန်းကြ မည်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ဆက်ကပ်လှူဒါန်းလိုကြသည့် အလှူရှင်များအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်း ကော်မတီထံသို့ ဆက်သွယ် နိုင်ကြပါသည်။